အကောင်းဆုံး Copper Foam ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Beihai
Copper Foam ကိုဘက်ထရီအနုတ်လက္ခဏာသယ်ဆောင်ပစ္စည်း၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသို့မဟုတ်လောင်စာ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအောက်ခံ၊ ဆဲလ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းသယ်ဆောင်သူနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအရံပစ္စည်းများအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကြေးနီအမြှုပ်သည်ဘက်ထရီ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်သုံးသောအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များရှိသည်။
Copper Foam ကိုဘက်ထရီအနုတ်လက္ခဏာသယ်ဆောင်ပစ္စည်း၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသို့မဟုတ်လောင်စာ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအောက်ခံ၊ cellcatalyst သယ်ဆောင်သူနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အကာအရံပစ္စည်းများအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကြေးနီအမြှုပ်သည်ဘက်ထရီ၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်သုံးသောအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသိသာထင်ရှားသည့်အားသာချက်များရှိသည်။
၁) ကြေးနီအမြှုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူဂုဏ်သတ္တိရှိသည်၊ ၎င်းကိုအပူ conduction ဓါတ်ရောင်ခြည်၏မော်တာ/လျှပ်စစ်နှင့်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင်တွင်ကျယ်စွာသုံးနိုင်သည်။
၂) ကြေးနီအမြှုပ်သည်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုကြောင့်၎င်း၏နီကယ်သွပ်ဘက်ထရီနှင့်လျှပ်စစ်နှစ်ထပ်အလွှာ capacitor အတွက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုအသုံးချခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အာရုံစိုက်မှုကိုလည်းထိခိုက်စေသည်။
5PPI မှ 80PPI
0.25g/m3 မှ 1.00g/cm3
၉၀% မှ ၉၈%
၅ မီလီမီတာမှ ၃၀ မီလီမီတာ
၅၀၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀၀ မီလီမီတာ
၀.၅ ~ ၅%
2. စက်မှုအပူအင်ဂျင်နီယာ: အစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အပူစီးကူးပစ္စည်းများ၊ စက်မှုသန့်စင်ပစ္စည်းများ၊ အဆင့်မြင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ။
၃။ လုပ်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းများ - အသံငြိမ်စက်၊ တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှု၊ ကြားခံလျှပ်စစ်သံလိုက်ကာကွယ်မှု၊ ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာ
၄. Battery Electrode Material: ၎င်းကို nickel-zinc, nickel-hydrogen ဘက်ထရီနှင့်လျှပ်စစ်နှစ်ထပ် capacitor ကဲ့သို့ဘက်ထရီ electrode frame ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၅။ ပေါ့ပါးသော၊ ပေါ့ပါးသောယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ၏အလေးချိန်နှင့်ပေါ့ပါးသောအဆောက်အအုံများ
၆။ ကြားခံပစ္စည်း: ဖိအားတိုင်းကိရိယာအတွက်ဖိအားလျှော့ချကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: Alumina Ceramic Foam Filter ဖြစ်သည်
ဘက်ထရီ Copper Foam
အနက်ရောင် Metallic Copper Foam
Porous Copper Foam ဖြစ်သည်